OnePlus 8 Lite's design leaked, How does it look? - TechPana Tech News Nepal
आईतवार, मंसिर २२, २०७६ १२:३७
वन प्लस एट लाइटको डिजाइन लिक, कस्ताे होला ?
मोबाइल निर्माता कम्पनी वन प्लसले सन् २०१५ मा ‘वनप्लस एक्स’को नाममा मिड रेञ्जको आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैलाई पछ्याउँदै कम्पनीले मिडरेञ्जमा दोश्रो स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
नाइन्टीवन मोबाइल र टिप्सको सिरियल वनलिक्सका अनुसार बजेट केन्द्रीत स्मार्टफोन वन प्लस एट लाइटकाे रुपमा आउन लागेकाे छ । फोनको तल्लो भागमा यूएसबी-सी राखिएको छ । बायाँ साइडमा भोल्युम बटन देखिएको छ भने दायाँ भागमा पावर तथा लक बटनसँगै अलर्ट स्लाइडर रहेकाे छ ।
यद्ययी फोनको मूल्य, त्यसमा रहने स्पेस, प्रोसेसर लगायतका फिचरहरु अझै स्पष्ट रुपमा बाहिर आइसकेकाे छैन । त्यसका लागि थप केही खुलासा वा त्यसको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदा सम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपी मिडरेञ्जको वनप्लस सेभेन टीको मूल्य ५९९ डलर अर्थात ६८ हजार रुपैयाँभन्दा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आकर्षक गेमिङ स्मार्टफोन ब्ल्याक शार्क थ्रीएस सार्वजनिक
लामो समयको पर्खाई पछि अन्ततः कम्पनीले ब्ल्याक शार्क थ्रीएस स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । यो
अझैं पनि मानिसहरु किन किनिरहेका छन् फिचर फोन ?
काठमाडौं । तपाईंको गोजीमा रहेको स्मार्टफोनले सेकेण्डमै अर्बौं अर्ब रुपैयाँको हिसाब किताब गर्नसक्छ । अभूतपूर्व